डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको १० अर्ब १४ करोड बक्यौता एक महिनाभित्र असुल गर्न निर्देशन
चैत मसान्तसम्ममा २४० ग्राहकले डेडिकेटेड र ८४ ग्राहकले पाए ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर बक्यौता एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्दै समितिले बक्याैताको जरिवाना र ब्याजसहित असुल उपर निर्देशन दिएको हो ।
यसबारे लेखा समितिले कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा ०७६ साउन ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । अध्ययन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता ब्याज र जरिवानासहित असुल उपर गरिनुपर्ने र व्यवसायीले नतिरे उनीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 'बक्यौता ब्याज र जरिवानासहित असुल उपर गरिनुपर्छ । अरुले १६ घण्टा लोडसेडिङ भोग्दा उद्योगहरुले २४सै घण्टा बत्ती बाल्ने गरेको देखिएको छ,' समितिमा उनले भने, 'विद्युत् विनियमावली २०७३ ले महसुल नतिरेको ६० दिनभित्रमा बत्ती काट्नुपर्नेमा अहिलेसम्म बत्ती काटेको देखिँदैन । अदालतले समेत बक्यौता तिर्न भनिसकेकोमा उद्योगीले अटेरी गरे । अब हत्कडी लगाएर भए पनि असुल उपर गरिनुपर्छ ।'
सांसद धर्मशिला चापागाईंले यो देश बिचौलियाले चलाएको हो ? भन्दै समितिमा प्रश्न गरिन् । 'के यो देश बिचौलियाले चलाएको हो ? राम्रोसँग कमाएर खाने र स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरुका लागि त बक्यौता तिर्न पनि समस्या हुँदैन,' उनले भनिन् । सांसदहरु राजन केसी र मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता ब्याजसहित असुल उपर गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २४० ग्राहकले डेडिकेटेड र ८४ ग्राहकले ट्रंक लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए ।